Inoanareo ve ny Fampianarana Sasany Momba ny Famoronana? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Boligara Bosniaka Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cinghalais Dangme Danoà Digor Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kabyle Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kikamba Kikaonde Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Mazateky (Huautla) Mende Mixe Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Totonac Tseky Tsonga Twi Tzotzil Télougou Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah ve ny Fampianarana Sasany Momba ny Famoronana?
Mino ny Vavolombelon’i Jehovah fa Andriamanitra no namorona ny zava-drehetra. Tsy inoanay kosa anefa ny fampianarana sasany momba ny famoronana, satria tsy mifanaraka amin’izay lazain’ny Baiboly. Andeha isika handinika roa amin’izany.
Ny halavan’ireo andro famoronana enina. Misy mino hoe naharitra 24 ora avy ny andro tsirairay, tamin’ireo andro famoronana enina. Mety hidika fotoana lava kokoa anefa ny teny hoe “andro” ao amin’ny Baiboly.—Genesisy 2:4; Salamo 90:4.
Ny fotoana nisian’ny tany. Misy mino hoe vao an’arivony taona teo ho eo izay no nisian’ny tany. Milaza anefa ny Baiboly fa efa nisy ny tany sy ny lanitra, talohan’ireo andro famoronana enina. (Genesisy 1:1) Noho izany, dia tsy lavin’ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy ny filazan’ny mpahay siansa hoe efa an’arivony tapitrisa taona izay no nisian’ny tany.
Na mino aza ny Vavolombelon’i Jehovah hoe nisy namorona ny zava-drehetra, dia tsy mitsipaka ny zavatra resahin’ny mpahay siansa izahay. Mino izahay fa mifanaraka ny Baiboly sy ny siansa.
INONA NO AZONAO IANARANA AO AMIN’NY BAIBOLY?
Boky avy Amin’Andriamanitra ny Baiboly
Inona ny torohevitry ny Baiboly hanampy anao hiatrika olana? Nahoana ny faminaniana ao no azo antoka fa ho tanteraka?
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Famoronana?
Milaza ny Baiboly fa enina “andro” ny famoronana. Naharitra 24 ora avy ve ireo andro ireo?
Mifanaraka Amin’ny Siansa ve ny Baiboly?
Misy zavatra tsy mifanaraka amin’ny siansa ve ao amin’ny Baiboly?
Ahoana Marina no Namoronana Izao Rehetra Izao?